Abstract: Sebenzisana, uguqulelo, kunye noHlelo lweeMveliso zakho zoYilo | Martech Zone
NgoLwesibini, Oktobha 27, 2020 NgoLwesibini, Oktobha 27, 2020 Douglas Karr
Sisebenza nefemu yesizwe ngoku ukuphuhlisa Iitemplate zeimeyile zokuthengisa ngokwesiqhelo kwisebe ngalinye nakwiiyunithi zeshishini. Kungenxa yokuba abathathi-nxaxheba, iikontraki, kunye nabaqambi bonke bekude, uyilo wavelisa iindlela zakhe kwaye wasebenza kwiinguqulelo kunye neqela lakhe lobunkokeli-emva koko wayinikezela kwiqela lethu ukuze liphendule ngokufaka iikhowudi nokuphumeza.
Umyili undazise kwi-Abstract. Abstract sisixhobo esisebenzisanayo kwi-Intanethi seMac apho inkampani yakho, iikontraki, kunye nabaxhasi banakho ukulawula, ukuguqulela kunye nokuyilwa kwamaxwebhu kwindawo enye.
Ukuhlela okanye ukwenza iifayile zoyilo, kuya kufuneka Khuphela usetyenziso lwe-MacOS desktop. Ukwabelana kunye nokufumana ingxelo, usetyenziso lwe desktop luhambelana kunye Usetyenziso lwewebhu olukhutshiweyo.
Inkqubo yokuHamba kokuSebenza
Abstract yenza ukuba iqela lakho lisebenze kwinkosi, kwisebe, lisebenzisane, linike ingxelo ngayo yonke indlela ukulungiselela imveliso yoyilo eyamkelweyo yemveliso.
Ngenisa - ukungenisa Umdwebo kwaye Adobe XD iifayile kwaye kwangoko wenze indawo esembindini yowona msebenzi wakho wokuyila usexesheni kunye namaxwebhu axhasayo.
Bambisana -Qalisa ukuphonononga ngokwenza isebe ngaphandle kwenkosi ukuyila kwiindawo zokusebenzela ezifanayo. Amasebe ziindawo ezikhuselekileyo apho wena kunye nabanye abaqulunqi banokusebenza kwiifayile ezifanayo ngaxeshanye, ngaphandle kokubhala ngaphezulu komnye nomnye okanye ngokuchaphazela inkosi.
Qalisa -Xwebhu kwaye ugcine umsebenzi wakho kunye nomxholo owongeziweyo, ukwakha amaxwebhu njengoko usiya. Ukubandakanya amanqaku malunga nento oyenzileyo kwaye kutheni eyinxalenye yokugcina umsebenzi wakho kwi-Abstract.
ingxelo -Cela ingxelo evela kwabanye abayili kunye nabachaphazelekayo, ngokuthe ngqo emsebenzini. Amagqabantshintshi kunye nezichazi-magama zirekhodwe kwiibhodi zobugcisa ukuze kube lula ukuzisebenzisa.
inguqulelo -Emva kokuba uyilo luvunyiwe kwaye ukulungele ukuqhubela phambili, inyathelo elilandelayo kukudibanisa, okanye ukongeza, utshintsho lwakho kwinkosi. Ungathelekisa iinguqulelo ezahlukeneyo zebhodi yezobugcisa ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba loluphi utshintsho ofuna ukulugcina kwinkosi kwaye zeziphi ongazenziyo. Kwaye, ukuba utshintsha ingqondo okanye wenze impazamo, ungasoloko ubuyela kuhlobo lwangaphambili.
imveliso Umsebenzi wotshintsho kuyilo uye kuphuhliso ngqo kwi-Abstract. Abaphuhlisi banokuthelekisa utshintsho, ukujonga imilinganiselo, kunye nokukhuphela iiasethi- konke kwikhonkco. Ukufikelela kombukeli kuko konke abakudingayo (kwaye kusimahla).
Abstract unikezela ngeminikelo eqhelekileyo kunye neyobungqina.
Qala uvavanyo lwakho lweentsuku ezili-14 Ishedyuli yeShishini kwiDemo yokuBonisa
tags: eqikelelwayoiadobe xduyiloingxelo yoyilomockupuyilo lwemvelisoIngxelo yoyilo lwemvelisoUmdwebouiimpendulo yakhouyilo lomsebenzisiulawulo lwenguqulo